Villa "Candela" - Ap.2 nge beach yabucala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJosip
UJosip unezimvo eziyi-692 zezinye iindawo.
Iipatimenti ‘‘Candela’’ zibekwe eStarigrad Paklenica, indawo encinci nethe cwaka yeeholide ephakathi kweentaba zeVelebit kunye nolwandle iAdriatic. Ipropathi yabo ye-2000 yemitha yesikwere inika ubumfihlo kunye nokuqonda okukodwa kwinkcubeko yaseMeditera ngenxa yendibaniselwano engaqhelekanga yolwandle oluhle lwabucala kwelinye icala kunye noluhlu lweentaba kwelinye icala.
IApartment No.2 ibekwe kumgangatho wokuqala. Ibandakanya ikhitshi, indawo yokutyela, amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela. Ikhitshi linezixhobo zangoku kwaye lixhotyiswe ngokupheleleyo. Indawo yokutyela idityaniswe nekhitshi kwaye ixhotyiswe ngetafile ye-4 kunye ne-TV ye-flat screen eneenkqubo zesathelayithi. Igumbi lokulala lokuqala linebhedi ekhululekileyo yokumkanikazi, kwaye igumbi lesibini linebhedi enkulu (2x 90x200cm) enewodrophu. Indawo yokutyela inokufikelela kwi-balcony enefenitshala.
Isixeko saseStarigrad sinembali etyebileyo eqala kwixesha langaphambi kwamaRoma. Yayakhelwe phezu kweentsalela zesixeko samandulo saseArgyruntum. Iindawo ezininzi zokugrumba zibalisa amabali enkcubeko eyayihlala kule ndawo. Ukusuka kwizinto ezahlukeneyo ukusuka kwixesha le-paleolithic elifunyenwe kwimiqolomba yeNtaba yeVelebit, ukuya kwiindonga ezinkulu zesixeko kunye namatye amangcwaba awodwa exesha lamaRoma, esi sixeko sinokuninzi esinokunikela kubo bobabini abanomdla kunye nabanomdla. Isixeko saseZadar, esikufuphi nendawo, sinelifa lemveli elikhulu kwaye sikulungele ukubonwa, kunye nezinye iidolophu ezincinci ezinelifa lenkcubeko kunye nezakhiwo.